क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतमै ‘सिटी स्क्यान सेवा’ - Paschimnepal.com
क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतमै ‘सिटी स्क्यान सेवा’
सुर्खेत । कर्णालीका नागरिकले सिटी स्क्यान सेवा लिनकै लागि नेपालगञ्ज वा नीजि अस्पताल धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल कालागाउँले आगामी असोजदेखी सिटी स्क्यान सेवा शुरु गर्नेभएपछि विरामीहरुलाई बाहिर धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने लागेको हो ।
क्रमिक रुपमा सेवामा अब्बल बन्न लागेको क्षेत्रीय अस्पतालले असोज १ गतेदेखी सिटी स्क्यान सेवा शुरु गर्दैछ । अस्पतालले हाल नयाँ भवनमा सिटी स्क्यानका लागि आवश्यक संरचनाहरुको खडा गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले सिटी स्क्यान मेशीन दिएपछि संरचना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतका मेडिकल रेकर्डर अधिकृत विनोद बस्नेतले जानकारी दिए ।
अस्पतालले विभागको सहयोगमा मेशीन सुर्खेत ल्याइसकेको छ । ‘मेशीन अस्पतालको नयाँ भवनमा राखिसकेका छौं ।’ बस्नेतले भने, ‘असोजदेखी सेवा शुभारम्भ गर्नेगरी काम अन्तिम चरणमा छ ।’
‘टाउको सम्वन्धी विरामी तथा दुर्घटनाका घाइतेहरुले सिटी स्क्यानकै लागि नीजि अस्पताल वा बाहिर जानु पथ्र्यो’ बस्नतेले थपे, ‘अस्पतालले नै मेशीन भित्राएपछि उपचारकै लागि अब बिरामीहरुले बाहिर धाउने पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।’
अस्पतालले सिटी स्क्यान गर्ने विरामीहरुको प्रकृति हेरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ । अस्पताल विकास समितिले उपचारको प्रकृति हेरेर अस्पतालले बिरामीहरुबाट कम्तीमा तीनहजारदेखी पाँचहजारसम्म शुल्क लिने निर्णय गरेको बस्नतेले बताए ।
अस्पतालमा सिटी स्क्यानका लागि यस अघि नै दरवन्दी कायम गरेको थियो । उक्त दरवन्दीमा रेडियोजोलिष्ट डा. रविन खड्का कार्यरत थिए । हाल खड्का काजमा भरतपुर अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेण्डन्ट पदमा कार्यरत छन् ।
‘अस्पतालमा कार्यरत डा. खड्का भरतपुर अस्पताल जानुभएको छ ।’ बस्नेतले भने, ‘अस्पतालले दरवन्दी माग गरेर सेवा शुरु गर्ने तयारीमा छौं ।’ अस्पतालले केन्द्रीय र प्रदेश सरकारलाई तत्काल सिटी स्क्यान हेर्ने रेडियोलोजिष्ट डाक्टरको व्यवस्था गर्न मागसहितको पत्र पठाइसकेको छ ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, भदौ १७, २०७५ 6:47:45 AM
Prevसर्पको टोकाइबाट बालिकाको मृत्यु
Nextतरकारीले बजार नपाएपछि किसानहरु चिन्तित